Ndifuna ukucima iakhawunti ye-Instagram. Ndiyenza njani? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ndifuna ukucima iakhawunti ye-Instagram. Ndiyenza njani?
Meyi 10, 2021 0 IiCententarios 559
Kubasebenzisi abaninzi, iinethiwekhi zokunxibelelana zezona zinto zilungileyo ezithe zenzeka kubo kuba ibavumela ukuba banxibelelane nehlabathi, kwabanye, iinethiwekhi zokunxibelelana ziye zaba yindlela yokuzithwalisa ulwazi kunye nokuba yinto enoxinzelelo kumhla nezolo. . Kwaye sesinye sezizathu zokuba kutheni uninzi lwabasebenzisi ligqibe kwelokuba lishiye iinethiwekhi zentlalo kwaye ziyinyani I-Instagram ayibaleki le nyaniso.
Ngaphambi kokuba ukhiphe i-Instagram yakho okanye uyisuse ngokusisigxina, kufuneka wazi izinto ezithile, enye yezi kukuba xa sele uyikhuphile yonke idatha onayo kwiprofayile yakho, ukuba ngumnqweno wakho ukugcina ulwazi Sincoma ukuba wenze isipele, ungakhathazeki, siya kukufundisa indlela yokwenza.
Eli nyathelo linokwenziwa kuphela kwi-PC yakho, Ayiveli kwiselfowuni, ngenisa iakhawunti yakho ye-Instagram ngendlela eqhelekileyo ngegama lakho lomsebenzisi kunye negama lokugqitha.
Khangela kwaye ukhethe icandelo labucala nokhuselekoOku kuyakukusa kwi-pop-up window apho kuya kufuneka ukhethe ukhetho lokucela ukhuphelo, oku kuya kubekwa kwicandelo ledatha yeakhawunti.
Inkqubo iya kukubuza isiqinisekiso sakho se-imeyile, ukuthumela ulwazi kule nto, ukuba ufuna ukuyitshintsha lithuba lokwenza njalo.
Inkqubo iyakukucela ukuba qinisekisa iphasiwedi yakhoNjengomlinganiso wokhuseleko, nje ukuba ungene kuyo kuya kufuneka ulinde ifayile ukuba ifike, oku kungathatha ukuya kwiiyure ezingama-48.
Ukukhuphela ifayile ayizibopheleli nokucinywa Oku kuthetha ukuba ungayicima iakhawunti, i-imeyile enolwazi iya kuthunyelwa kuwe
Ngexesha lokwenza Ukucinywa ngokupheleleyo kweakhawunti yakhoInkqubo iyakususa ngokupheleleyo kwinethiwekhi yoluntu, isuse yonke into enxulumene neakhawunti yakho kunye negama lomsebenzisi.
Kwelinye icala, ukuba nangaliphi na ixesha uthatha isigqibo sokubuyela kwi-Instagram, ngekhe uphinde ubuyele Sebenzisa igama lakho umsebenzisi wangaphambili, oku kungenxa yokuba inkqubo ikuvimba ngokupheleleyo.
Cima iakhawunti yakho unaphakade:
Eli nyathelo lisisigxinaOko kukuthi, nje ukuba wenze ukucinywa, awuyi kuba nakho ukusebenzisa igama lomsebenzisi owawunalo kwakhona, ayisiyiyo le okanye kwenye iakhawunti.
Ngena kwi-Instagram ukusuka kwisikhangeli ngokuthe ngqo, nokuba kukwikhompyuter yakho okanye kwiselfowuni.
Kufuneka ungene ngegama lakho lomsebenzisi kunye negama lokugqitha.
Kwimenyu yephepha kufuneka ukhethe ukhetho lokucima.
Nje ukuba le nto ikhethwe, inkqubo iya kubonisa uthotho lweenketho, apho iya kuthi icele khona Cacisa izizathu ofuna ukucima iakhawunti.
Khetha eyona ifanele iimfuno zakho emva koko ucofe into leyo "Cima umphelo iakhawunti."
Inkqubo inokuthatha malunga neentsuku ezingama-30 ukucima iakhawunti yakho kunye nezinye ezimbalwa Iintsuku ezingama-90 zokucima ngokupheleleyo lonke ulwazi lwakho lwe-Instagram.
3 Cima iakhawunti yakho unaphakade:
4 Amanyathelo okulandela:
Meyi 10, 2021
Ungabutshintsha njani ubumfihlo bevidiyo kwiYouTube?
Uyigcina njani i-gif kwi-Twitter?